WZX-Nahoana ianao no manao akanjo tsy misy akanjo vita amin'ny vata famatrarana ambony?
Fa maninona no manao akanjo tsy misy akanjo vita amin'ny vata fampangatsiahana?
Nylonshapewear tank top amin'ny breathability tsara sy ny hamandoana-wicking vokany. Misy fomba isan-karazany amin'ny shapewear tank top, toy ny open-bust shapewear tank top, Wireless shapewear vests, shapewear vests with underwired and wide strap, camisole ho an'ny vehivavy shapewear tank tops with built-in bra sy ny fomba samihafa dia samy hafa ny tanjona.
Ny tank top for shapewear tena ilaina dia akanjo tsy fahita firy hanaovana sosona na irery.
Tsy vitan'ny hoe azo anaovana samirery ny saron-tava misy shapewear, toy ny camisole isan'andro, fa miasa kokoa noho ny vest isan'andro izy io, satroka satroka shapewear manampy amin'ny fanalefahana ny vongany sy mamolavola ny endriky ny vehivavy.
Shapewear tank top dia fanaraha-maso ny kibo sy mamolavola ny andilany ary manamora ny fitafian'ny vehivavy lamaody tsara tarehy.
Ny tampon'ny tanky shapewear mahazo aina dia azo atao mivantana ho toy ny camisole isan'andro ary manana tsipika 4-fomba izay tena mihenjana sy tsy mamehy.
Vita amin'ny nylon sy spandex avo lenta izy ireo, na dia amin'ny hafanana fahavaratra aza.
Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hampifanaraka ny vokatrao amin'ny kofehy miasa ary manampy kofehy mangatsiaka mba hanomezana toetra bebe kokoa ny vokatrao.
Raha tianao hatao mandritra ny vanim-potoana rehetra ny tampon-tank shapewear anao dia ny nylon sy spandex ihany no ilainao ary ny top tanky shapewear dia mety ho lasa tampony amin'ny akanjo mafana ary koa mamolavola ny vatan'ny vehivavy rehefa tonga ny ririnina.
Akanjo vehivavy cami miaraka amin'ny bra misy tady tsy miboridana. Ny mpamolavola vehivavy ambony indrindra amin'ny compression dia manome endrika tena mampahazo aina izay mamihina ny fiolahany, mahatonga ny vehivavy hahatsapa ho mahagaga raha mijery mahatalanjona.
Ny mpanamboatra WZX shapewear dia orinasa mpanamboatra shapewear avy any Shina izay manohana ny fanamboarana ny karazana shapewear rehetra. Mamokatra tampony shapewear avo lenta izahay izay mifoka rivotra, mahazo aina ary mienjana be.
Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa aminay
Mpanamboatra Shapewear Shapewear Camisole Orinasa Shapewear Shapewear OEM ODM Shapewear Tank Top Tank Top vehivavy mpamolavola vatana Body Shaper Camisole
Précédent Akanjo lehilahy tsy misy seamless WZX Seamless Lehilahy
Ahoana no fiasan'ny Shapewear ary maninona no tsara kokoa ny Shape Shaper? MANARAKA